Ndebanye aha adịchaghị - eTurboNews | Nddị | Akụkọ Njem
Home » Ndenye ego adịchaghị
Ndenye ego adịchaghị
Ịdenyela aha? Banye:
Pịa ebe a ka ịbanye
Nweta na -enweghị ndebanye aha:
Ịnweta ịgụ akụkọ niile na -akparaghị ókè.
Nweta ịgụ nchịkọta isi atọ nke isiokwu niile.
Ịnweta ịgụ akụkọ zuru oke nke akụkọ anaghị adịcha mma.
Isiokwu nwere mgbasa ozi.
Nnweta nwere oke na adblockers na.
Nweta dị ka onye debanyere aha:
Nweta zuru oke na akụkọ adịchaghị na nke anaghị adị.
Mba ma ọ bụ mgbasa ozi nwere oke.
Nweta ịge ntị ụdịdị vidiyo na akụkọ niile.
Nhọrọ ndị ọzọ maka atụmatụ adịchaghị na VIP/onye nkwado (lee n'okpuru).
Na nso nso a eTurboNews
nke Harry Johnson dere
nke Linda S. Hohnholz dere
John De Fries, onye isi oche HTA na onye isi oche kwuru, "Oge ọkọchị kacha elu kwụsịrị na ego mbata n'ọnwa Ọgọst na ọnụ ụlọ ga -esi ike maka ụlọ ọrụ nkwari akụ Hawaii na steeti niile ma e jiri ya tụnyere Ọgọstụ 2019." "Agbanyeghị, ịrị elu n'okwu COVID-19 na ụlọ ọgwụ na-esochi nke Delta dị iche iche na-echetara anyị na anyị ka nọ n'ọnọdụ mmiri ka anyị na-abịaru oge ọdịda dị nwayọ n'oge maka njem."
Ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ ọnwụ sitere na COVID na US ga -akarị ọnụ ọgụgụ oria ojoo 1918 n'ọnwa a. Anyị enweghị ike isi ike na ọdachi na -aga n'ihu, nke a na -egbochikarị.
Dị ka ụfọdụ akụkọ si kwuo, Sudan na -achọ ugbu a ịkwụghachi ụgwọ ego dị elu nke ukwuu yana ịgbatị enyemaka ego Russia maka ikwe ka ntọala ụgbọ mmiri ndị agha Russia na ụsọ oké osimiri Sudan.
Ndị nnọchi anya njem US: Iwu njem mba ofesi na -agbanwe ogologo oge
Industrylọ ọrụ njem n'ozuzu agaghị agbake na COVID ruo mgbe njem mba ofesi maliteghachiri ike. Taa akara nnukwu nganga n'ihu na ebumnuche ahụ.
Njem nlegharị anya Jamaica na -eziga ezinụlọ Sue McManus arịrịọ
Minista njem nlegharị anya nke Jamaica, Hon. Edmund Bartlett, akasila ndị ikwu na ndị enyi nke onye na -ahụ maka njem nlegharị anya, Sue McManus, obi ebere, onye nwụrụ na nso nso a na United States.
Na -atọ ụtọ dịka ndekọ Seychelles Karịrị ndị ọbịa 100,000
Ndị njem si Israel na -apụ na ọ toụ nke mkpọtụ moutya mpaghara na ịhụ ndị na -agba egwu ọdịnala na Sọnde, Septemba 19, 2021, n'ehihie ka ebe Seychelles na -aga edekọ ihe karịrị ndị ọbịa 100,000 n'ụbọchị taa.
IATA: US ịmalitegharị ndị njem ọgwụ mgbochi bụ ozi ọma
Mkpebi nke nchịkwa Biden nyere ndị njem ọgwụ mgbochi ohere ịbanye US na nsonaazụ COVID-19 na-adịghị mma tupu ha eme njem site na mbido Nọvemba bụ ndị IATA nabatara.
Nke a bụ nnukwu mgbanwe na njikwa nje a ga-eme ka mgbake nke nde nde ọrụ metụtara njem furu efu n'ihi mmachi njem mba ofesi.
Ndị nyocha ụlọ ọrụ na -ebu amụma njem ụlọ UK ka ọ laghachite na ọkwa 2019 n'oge 2022, mgbe ọ ga -eru njem nde 123.9. Agbanyeghị, njem mba ofesi ga-ewe ogologo oge, ha agaghị alaghachi na ọkwa COVID tupu 2024, mgbe ha ga-aga njem nde 84.7.
Onye ozi agwaetiti Canary 'enweghị nchekwa' ka mmadụ 5,000 na -agbapụ na mgbawa La Palma
N'aka nke ọzọ, anyị na -eziga ozi ka ndị njem wee mara na ha nwere ike gaa agwaetiti ahụ wee rie ihe pụrụ iche, hụ ya n'onwe ha, ”Minista njem nlegharị anya Spain Reyes Maroto kwuru.
Mgbe onye isi ala Saudi na PM PM na -ekwu okwu ọ nwere ike bụrụ azụmahịa UNWTO dị mkpa
nke Juergen T Steinmetz dere
Ọrụ Saudi na njem nlegharị anya ụwa, yana onye isi ụlọ ọrụ UNWTO si Spain gaa Saudi Arabia nwere ike bụrụ nnukwu ihe a na -akpọ na oku ekwentị taa. Ọkpụkpọ dị n'etiti onye isi ala Saudi Arabia Mohammed bin Salman na Prime Minista Spain Pedro Sánchez taa mepere ohere maka ịkọ nkọ maka ọdịnihu nke njem nlegharị anya ụwa.
Uru Lufthansa na -achọ iwelie ijeri US $ 2.5
Kọmitii Executive nke Deutsche Lufthansa AG taa, site na nkwado nke Boardlọ ọrụ na -ahụ maka ụlọ ọrụ, kpebiri iji ikike ikike C maka mmụba isi obodo na ikike ndenye aha ndị nwe ụlọ ọrụ ahụ. Isi ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ nke EUR 1,530,221,624.32 ugbu a, nke kewara na mbak 597,742,822, ga-abawanye site na ịnye 597,742,822 mbak uru ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ.
Gọọmentị German na -enye ego maka nchekwa nchekwa anụ ọhịa na Tanzania
Na Tanzania ọgbara ọhụrụ, oghere echekwara maka nchekwa oke ọhịa na anụ ọhịa mejupụtara pasent 29 nke odida obodo. A na -ewepụta pasentị iri na atọ nke mba ahụ maka ogige ntụrụndụ mba na ebe nchekwa egwuregwu ka ọ bụrụ maka ụlọ ọrụ ndị njem.
Uru Ahụike Ọhụrụ 18 dị egwu mgbe ị na -anụ ụtọ mmanya French
nke Dr. Elinor Garely - pụrụ iche nye eTN na onye nchịkọta akụkọ, mmanya.travel
Ịụ iko mmanya French kwa ụbọchị nwere ike inye aka na Alzheimer, Cancer, Memory Loss, Ọkpụkpụ Ọkpụkpụ, Anya Ahụike, Cholesterol dị elu, ọrịa imeju, ọrịa strok, ịda mbà n'obi, oghere, oyi nkịtị. Nke a bụ ihe kpatara ya:
Maazị Efsun Ahmadov abụghị naanị onye isi oche nke Next Group na Baku, kamakwa onye dike njem nlegharị anya mbụ akpọrọ ka ọ sonye na nnukwu ụlọ oriri na ọ ofụ heroụ nke ndị dike nke njem.
Enweghị ụlọ nkwari akụ nkịtị: St. Regis na -enye Ngwọta Ọhụrụ maka Nsogbu Ọha
site na Stanley Turkel CMHS hotel-online.com
Na 1904, Colonel John Jacob Astor mebiri ala maka iwu ụlọ nkwari akụ St. Regis n'akụkụ akuku Fifth Okporo ụzọ na 55th Street na mpaghara obibi pụrụ iche nke New York n'oge ahụ.
Myriam St.Ange nwụrụ n'ụzọ dị mwute na Satọde, Septemba 18, 2021, ụbọchị anọ ka ụbọchị ọmụmụ 74th gasịrị n'agwaetiti La Digue.
Victoria House Resort & Spa, Belize na -ewepụta ọ funụ na izu ike ọhụrụ na anyanwụ
Ngwongwo agwaetiti nke Victoria House Resort & Spa na-emeri nke dị n'ụsọ oké osimiri Belize na-enye ndị ọbịa ọtụtụ ihe eji achọ mma maka ịpụ apụ.
India buliri ikike ụgbọ elu ya na 85% nke ọkwa pre-COVID
Mgbanwe ndị Ministry of Aviation kwupụtara ga -enye ohere ka ndị na -ebu ikuku India rụọ ụgbọ elu karịa ma kwalite ibu ndị njem na mbido mmemme mmemme mba n'ọnwa na -abịa.